Ahoana ny fanombatombanana ny tetikasanao amin'ny Internet manaraka. Martech Zone
Ahoana ny fanombatombanana ny tetik'asa Interneto manaraka
Friday, May 28, 2010 Alahady, Aogositra 10, 2014 Douglas Karr
Rahoviana io no hataon'ny?
Io no fanontaniana mipetraka manenjika ahy rehefa mitanisa tetikasa iray. Mety hieritreritra ianao rehefa avy nanao an'ity taona ity fa afaka manonona tetikasa toa ny lamosin'ny tanako aho. Tsy ny fomba fiasany. Vaovao ny tetikasa rehetra ary hanana ny fanambiny manokana. Manana tetik'asa iray aho izay tara 30 andro tsotra izao noho ny fanovana kely nataon'ilay API fa tsy afaka niasa manodidina izahay. Tezitra amiko ny mpanjifa - ara-drariny izany - noteneniko izy ireo fa afaka ora vitsivitsy. Tsy hoe nandainga aho fa tsy mbola naminavina hoe ho fongotra ny singa iray amin'ny API niankina taminay. Tsy nanana loharanom-pahalalana hamitana ny olana momba ny olana aho (manakaiky ihany anefa izahay!).
Mandà ny handeha amin'ny lalana hafa aho ary handidy ora fa tsy vinavinan'ny tetikasa. Heveriko fa ny fandoavana ora maro dia mamporisika ireo mpiantoka handeha amin'ny fandaniam-potoana be loatra. Ny tetikasa rehetra andoavako olon-kafa mandritra ny ora maro dia tsy mandeha. Efa tara daholo izy ireo ary efa tratran'ny asa aho. Mifanohitra amin'izany no izy, ireo tetikasa nandoavako sarany tetikasa dia tonga ara-potoana ary nihoatra ny nantenain'izy ireo. Tiako mihoatra ny andrasan'ny mpanjifako koa.
Fahadisoana efatra izay hitsoka ny tombatombanao manaraka:
Fahadisoana voalohany: isao hoe mandra-pahoviana no hataonao izay nangatahan'ny mpanjifa. Wrong. Nanao ny hadisoanao voalohany ianao ary nanombatombana ny zavatra nangatahan'ny mpanjifa fa tsy inona ilay tena tadiavin'ny mpanjifa. Samy hafa hatrany ny roa ary ny mpanjifa dia maniry indroa mihoatra ny antsasaky ny vidiny.
Fahadisoana faharoa: Tsy nandinika ny fanemoran'ny mpanjifa ianao. Manampia fanemorana tapa-bolana eo amin'ny tetikasa satria tsy manome anao ny fidirana ilainao ny sampan-draharahan'izy ireo IT. Miezaka ny milaza amin'ny mpanjifa foana aho, raha mahazo "A" amiko amin'ny daty manokana ianao dia afaka mandefa. Raha tsy izany, Tsy afaka manolo-tena amin'ny daty misy aho. Ny tabilao Gantt dia tsy miova amin'ny fomba mahagaga, manana mpanjifa sy asa efa voalahatra aho.
Fahadisoana fahatelo: avelanao ny mpanjifa hanery anao hanao fanaterana taloha. Tsy nampidirinao fikirakirana sy fitsapana diso. Te hanapaka ny vidiny ny mpanjifa ka nasainy novitainao fotsiny ilay izy. Valiny diso! Raha tsy mandoa vola amin'ny fikirakira lesoka sy fitsapana ny mpanjifa dia alao antoka fa handany ora maro amin'ny bibikely sy ny fikolokoloana aorian'ny fivelomanao ianao. Aloavy ho azy na amin'ny lafiny rehetra: hanao ny asa ianao izao na ho avy.
Hadisoana fahefatra: miova ny fanantenana eo an-dàlana, misavoritaka ny fandaharam-potoana, miova ny laharam-pahamehana, misy ny olana tsy nampoizinao, nivadika ny olona…. Ho be aoriana kokoa noho ny nantenainao ianao. Aza manaiky ny fandaharam-potoana fohy eo ambany faneren'ny mpanjifa. Raha nifikitra tamin'ny fanantenanao tany am-boalohany ianao dia mety ho nanao izany!
Vao tsy ela akory izay dia nanomboka fifanarahana tamin'ny orinasa iray izahay izay nifanarahanay ny fandoavan-ketra ho an'ny tetikasa iray ary avy eo ny tahan'ny fanavaozana sy fikojakojana isam-bolana. Nipetraka izahay ary nifanakalo hevitra ny tanjona ary inona ny laharam-pahamehan'izy ireo - ary tsy niresaka akory ny fampifandraisan'ny mpampiasa, ny famolavolana na ny zavatra hafa. Nametraka daty 'mandeha mivantana' mahery vaika izahay fa mahery setra, saingy takatr'i Pat tanteraka fa ny tetikasa dia mety ho mialoha amin'ny endrika sasany noho ny hafa. Nofantsinay ny fanombohana ary efa mandeha amin'ny lisitr'ireo fanatsarana izahay. Ny tena zava-dehibe kokoa, samy faly izahay.
Tsy mamoaka tombana be loatra aho fa mbola mitranga indraindray. Raha ny marina dia miomana ny hamerina fifanarahana vao haingana aho satria, rehefa niasa tamina tetikasa vitsivitsy niaraka tamin'ny mpanjifa aho dia fantatro fa na dia nanaiky tanjona tsy mazava aza ny mpanjifa dia tsy ho faly izy ireo raha tsy mahazo folo heny ny vidin'ny fifanarahana. Iriko fotsiny ny hahita ireo olona ireo aloha. izy ireo mila manofa ny loharanon-karen'izy ireo mandritra ny ora iray… mpamono olona ny fidirana amin'ny tombatombana miorina amin'ny tetikasa miaraka amin'izy ireo.
Manomboka mamantatra izay itovizako aho amin'ireo tetik'asa mahomby navoakanay na atolotray. Ny ankamaroany dia nianarako tokoa Fiofanana momba ny varotra miaraka amin'ny fanampian'ny mpanazatra ahy, Matt Nettleton. Fantatro ihany koa fa ny ankamaroan'ny fahombiazan'ny tetikasako dia efa nanomboka talohan'ny nanasoniavako ny mpanjifa akory!
Ahoana ny fomba hanomboana tombana amin'ny tombatombana:
Mahazo an-tsaina rehefa andrasan'ny mpanjifa izany. Ny fanantenan'izy ireo no zava-dehibe indrindra. Mety ho hitanao fa manana herintaona hamita ny asa ianao. Maninona no manombatombana 2 herinandro raha faly izy ireo mandritra ny 2 volana? Mbola afaka mamita ilay asa ao anatin'ny 2 herinandro ianao ary mihoatra ny zavatra antenainao rehetra!
Mahazo an-tsaina inona no mendrika ny mpanjifa. Raha tsy hitanao izay ilana azy dia fantaro hoe inona ny teti-bola. Azonao atao ve ny mamita ilay tetik'asa ary mihoatra ny andrasana mifototra amin'izany teti-bola izany? Ataovy avy eo. Raha tsy vitanao dia avelao izany.
Fantaro hoe inona ny tanjon'ny tetikasa dia. Ny zava-drehetra ivelan'ny tanjona dia ivelan'ny tanjona ary azo alamina avy eo. Miasa hametraka tanjona ary hamita izany tanjona izany. Raha te hampisondrotra sy miasa ny bilaogy dia atsangano tsara ilay bilaogy. Raha ny fananganana fampidirana mandefa mailaka dia alao handefa mailaka. Raha hampihena ny vidin'ny fahazoana izany dia esory ny vidiny. Raha te hampivelatra ny tatitra dia atsangano ny tatitra. Tonga ny Pretty aorian'izay ary ny fanitsiana tsara dia mety handany vola be miaraka amin'ny fandaharam-potoana masiaka. Miasa amin'izay zava-dehibe indrindra.
Miasa mihemotra avy amin'ny ny haavon'ny hatsaranao. Ny ankamaroan'ny mpanjifako dia tsy mampiasa ahy amin'ny asa ambany loatra, mahazo ny volan'izy ireo amin'ny fikapohana ahy amin'ny entana lehibe izy ireo ary mameno izy ireo hamita ny asa mora. Tiako ireo mpanjifa ireo ary mikendry ny hihoatra ny andrasan'izy ireo aho ary hanome azy ireo sarobidy kokoa noho ny andoavany. Amin'ny faran'ny tetikasanay, matetika ambany ambany ny teti-bola na mihoatra ny tanjona, ary mialoha ny fandaharam-potoana izahay. Manome ahy efitrano ampy mihoatra ny andrasany izy ireo… tsotra be izany.
Mbola tratry ny tsindry aho hampihena ny sarany ary hahavita aloha, heveriko fa ny mpitantana rehetra dia mieritreritra fa izany no tanjon'izy ireo rehefa miasa miaraka amin'ireo mpifanaraka. Ratsy loatra izy ireo fa tsy mahita lavitra toy izany. Ampahafantariko fotsiny ny mpanjifa fa ny fandaharam-potoana fohy kokoa ary kely ny vola dia misy fiatraikany mivantana amin'ny kalitaon'ny asa nanakaramana ahy. Ny zavatra tsara momba ny fandoavana kontraktor lehibe izay mendrika azy dia ny hanaterany… ary azonao antenaina fa hanatitra izy. Rehefa manohy mametaka na mamono mahafaty ireo mpifanaraka aminao ianao dia aza gaga rehefa tsy misy amin'izy ireo dia mandeha foana. 🙂
Izaho koa dia tsy afa-manoatra foana. Tamin'ny fotoana nitrangan'ny farany dia nisafidy vahaolana fohy ny orinasa izay tsy maintsy aorin'izy ireo amin'ny mpanjifa tsirairay. Ny vidiko dia sahabo ho 1.5 heny amin'ny vidiny, fa izaho kosa hanamboatra azy io hahafahan'izy ireo mampiasa indray ilay rindranasa amin'ny mpanjifany tsirairay. Tena nihomehy ahy ilay Tale jeneraly rehefa nilaza tamiko izy fa "nitahiry" tamin'ny mpiantoka hafa (mpandraharaha narosoko). Mpanjifa efatra manomboka izao, nandoa 3 heny mihoatra ny vidin'ny fampiharana izy. Dummy.
Nitsiky aho ary nifindra tamin'ilay mpanjifako manaraka sambatra sy mahomby ary mahasoa kokoa.
Tags: tombana amin'ny tetikasafandaharam-potoana amin'ny tetikasaweb projecttetikasa tranonkalatetikasan'ny tranonkalafandaharam-potoanan'ny tetikasa tranokalafandaharam-potoana tranokala
Manao tranga ho an'ny marketing amin'ny mailaka Outsourcing
Famokarana: Ilay Rubrik "haingana, mora, tsara"
May 29, 2010 amin'ny 6: 58 AM
Hoy i Doug. Mbola miady mafy amin'izany koa aho. Rehefa nanontaniana aho hoe rahoviana aho afaka manana tranokala vita, dia nianatra namaly aho, “miankina amin'ny fandraisan'ny olona ny zavatra rehetra angatahiko izany.”
May 30, 2010 ao amin'ny 3: 58 PM
Ankasitrahako ny voninahitrao, Doug. Hanampy fanao iray hafa tsara indrindra aho - ampahafantaro ny mpanjifanao ary mangarahara. Izany rehetra izany dia mitaky ambaratonga fahatokisana sasany.